Nidoboka ao am-ponja ao Ankazobe: mpianaka nisandoka ho jeneraly sy mpanao gazety | NewsMada
Nidoboka ao am-ponja ao Ankazobe: mpianaka nisandoka ho jeneraly sy mpanao gazety
Nidoboka am-ponja ao Ankazobe, ny alarobia 31 oktobra 2018 lasa teo, ireo mpianaka nisandoka ho jeneraly avy ao amin’ny prezidansa sy mpanao gazety. Nikasa hamoaka antsokosoko ireo omby naiditra foriera, azon’ny zandary nandritra ny hetsika “Opération Mandio”, izy mianaka ireto…
Voasambotry ny zandary avy ao amin’ny kaompania Ankazobe, ny 26 oktobra 2018 lasa teo tao amin’ny kaominina ambanivohitra Fiadanana, distrikan’Ankazobe, izy mianaka nilaza fa jeneraly sy mpanao gazety ireto. Araka ny fanazavan’ny zandary, nisy omby miisa 31 tsy misy taratasy mazava tratra tamina sefom-pokontany iray ao an-toerana, nandritra ny “Opération Mandio”. Naiditra foriera avy hatrany ireo omby ireo. Tonga tao amin’ny fokontany Ambohimanarivo nikasa hamoaka ireo omby ireo ho azy izy mianaka, ny 25 oktobra 2018. Nolazain’izy ireo fa hoe omby madio, efa nanaovan’izy ireo taratasy fifampivarotana “acte de vente” hosoka niaraka tamin’ny sefom-pokontany. Nohamafisin’ny zandary fa efa niakatra teny anivon’ny fampanoavana ilay sefom-pokontany sy ny delege tamin’izany fotoan’ny “Opération Madio” izany ka nahazoan’izy ireo fahafahana vonjimaika. Efa nandalo tao amin’ny fitsarana ao Ankazobe izy mianaka talohan’izao fidinany tany amin’ny kaominina sy ny fokontany izao ka nilaza fa jeneraly avy amin’ny prezidansa ilay rainy raha mpanao gazety kosa ilay zanany. Nitaky ny hamoahana ireo omby ireo avy hatrany izy ireo. Lasa namonjy tany Ambohimanarivo taorian’izany izy mianaka, saika hikarakara taratasy maro avy any amin’ny fokontany sy ny kaominina hilazana fa madio ireo omby ireo satria tsy nanome ny omby ny fitsarana ary namoaka didy tsy hahafahan’ireo omby ireo hivoaka.
Saika hanindry ny fitsarana izy mianaka…
Nidina ifotony nikaroka ireo olona ireo ny zandary rehefa nandre ny fisian’ireto mpianaka misandoka andraikitra ireto. Vokany, tratra teny ambony moto avy any Fiadanana hihazo an’Ankazobe izy mianaka, ny 26 oktobra 2018. Fantatra, nandritra ny fanadihadiana, fa mpisandoka andraikitra saika hanindry ny mpitsara sy ny mpitandro filaminana izy mianaka ireto fa tsy jeneraly sady tsy mpanao gazety akory. Natao famotorana ary nentina teo anatrehan’ny fampanoavana ao Ankazobe ka niafara tamin’ny fampidirana vonjimaika am-ponja izany. Lasa nandositra kosa ilay sefom-pokontany, mbola nahavita nanao taratasy fifampivarotana sandoka. Eo am-pikarohana azy ny zandary ao Ankazobe. Mitohy ny fanadihadiana momba ity raharaha ity.